Global Voices teny Malagasy » Andron’ny ”Mate”, Fanomezana Voninahitra Ny zava-pisotro Nentim-paharazana Amerikana Tatsimo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Jolay 2017 2:04 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela García Calderón Orbe Nandika (fr) i Alexandra Borra, Caroline Charrier, imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Arzantina, Orogoay, Hevitra, Mediam-bahoaka, Sakafo, Zavakanto & Kolontsaina
Sarinà tavoara mahazatra androsoana ny mate. Sary tao amin'ny Flickr an'i Diego  (CC BY-NC 2.0).
Ny 30 novambra no fankalazana ny Andron'ny Mate . Ity zava-pisotro mafàna tsy misy alikaola ity, na dia an'ny lova ara-kolotsainan'ny firenena Amerikana Tatsimo maro aza, dia hita manerana an'i Arzantina sy Orogoay, izay tena miparitaka lavitra tokoa ny fanjifàna azy.
Voakarakara miaraka amin'ny raviny sy ny sampany voaendy ny mate, ary avy eo totoina ho hierba mate , antsoina ihany koa hoe « diten'ny zezoita » na « diten'ny Paragoay ». « Mate » no anarana omena ilay tavoara kely fampiasa araka ny nentim-paharazana ho toy ny zinga fandomana zava-pisotro.
Ankehitriny, tsy afaka eritreretina ny fanafoanana ny fanjifàna azy any Arzantina. Kanefa, izany no zava-nitranga tamin'ny taonjato faha-XVII izay niheverana ny fisotroana ny mate ho toy ny « fahazarana maharikoriko  », « areti-mifindra mampidi-doza any amin'ireo mponina teratany ».
Tao anatina taratasy nosoratany ho an'ny mpanjaka lahy, [ny governoran'i Buenos Aires, Diego Marín ] i Negrón dia te-hisarika ny sainy amin'ny «tranga hoe ny fisotroana ny yerba (mate) imbetsaka ao anatin'ny andro iray miaraka amin'ny rano mafana be loatra dia fironana maharikoriko mankamin'ny ratsy sy maloto». Ny fisotroana mate dia «mahatonga ny olona ho kamo, ary hitondra ny tany amin'ny fahaverezana. Koa satria efa niely be loatra ary ankehitriny efa tafaraikitra tsara io fironana mankamin'ny ratsy io, matahotra aho fa tsy afaka ny hanafoana izany isika raha tsy Andriamanitra tenany mihitsy no hanao izany », hoy ilay mpiasampanjakana izay nanantena fa ny Fitondran'Andriamanitra no hamita ny zavatra tsapany fa tsy ho vitany. Taty aoriana, Hernandarias  [governoran'i Buenos Aires, Hernando Arias de Saavedra, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe ] dia nanafoana ny yerba mate. «Aoka tsy hisy intsony olona, manomboka izao, handeha hitady yerba na haniraka indiana hàka ka hitondra izany avy eo. Indrindra aza manandrana ny hahazo izany raha tsy tanareo ny hangiazana izany avy any aminareo, ary amin'izany tranga izany, tsy maintsy hodorana eny amin'ny toerana ho an'ny daholobe izany ».
Tsy vitan'ny nibaiko ny handoroana ilay ahitra fotsiny i Hernandarias fa nametraka  ihany koa izy sazy ho an'izay rehetra « mampiditra na manana fikasana hampiditra ilay ahitra ao an-drenivohitra » : 100 pesos ho an'ireo Espaniola na 100 kapoka karavasy ho an'ireo tompontany.
Araka ny fandinihana nataon'ny Institut Nactonal de la Yerba Mate ,(Ivontoerana Nasionaly Fandalinana ny Yerba Mate) mahalany hatramin'ny 100 litatra-nà  mate isan-taona ireo Arzantina :
En el #DiaNacionalDelMate  te contamos que los argentinos consumen 100 litros de mate al año https://t.co/Qk8LA3wfog pic.twitter.com/HlBYdLYMMh 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/01/101508/
 Andron'ny Mate: http://www.lanacion.com.ar/1850048-hoy-es-el-dia-del-mate-recuerdo-del-dia-en-que-lo-prohibieron
 hierba mate: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ilex_paraguariensis
 fahazarana maharikoriko: http://www.aimdigital.com.ar/2012/05/18/prohiben-tomar-mate-en-buenos-aires/
 Institut Nactonal de la Yerba Mate: http://www.inym.org.ar/
 100 litatra-nà: http://www.infobae.com/2015/11/30/1772841-los-argentinos-consumen-100-litros-mate-ano